Antoko mpihira : 10 taona ny Malagasy Gospel Choir -
AccueilVaovao SamihafaAntoko mpihira : 10 taona ny Malagasy Gospel Choir
Antoko mpihira : 10 taona ny Malagasy Gospel Choir
21/08/2018 admintriatra Vaovao Samihafa 0
Antoko mpihira miangaly ny gadona gospel, ary ahitana mpikambana tovovavy 200. Mankalaza ny faha-10 taonany amin’ity taona ity ny Malagasy Gospel Choir. Ankoatra ireo andriambavilanitra mpikambana, dia lahitokana ao anatin’ity antoko mpihira ity i Harris, ilay tovolahy manana olana ara-pahitana. Izy rahateo no feon-dehilahy tokana ao anatin’ny tarika.
Ho fanamarihana ny faha-10 taonan’izy ireo dia nisy ny fihaonana natao tany Toliara ka nisongadina tamin’izany ny fifampizarana. Nisy ny fijoroana vavolombelona nataon’ireo mpikambana taloha mikasika ny fiainan’izy ireo taorian’ny Malagasy Gospel Choir sy ny tombony azon’izy ireo tamin’izany. Ireo mpihira ankehitriny kosa dia nizara ny traikefany sy ireo karazana tombontsoa azony ao anatin’ny tarika. Nanamarika ny fankalazana ny nahitana an’i Talike Gellé, ilay andriambavilanitra malagasy fantatra eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena amin’ny fivoizany ny « beko », avy any amin’ny faritra Atsimo. Nisy ny fampiaraham-peo teo aminy sy ny Malagasy Gospel Choir.
Tafiditra ao anatin’ny tetik’asan’ny ONG Bel Avenir any Toliara ny Malagasy Gospel Choir. Efa maro ireo firenena notetezin’izy ireo tao anatin’izay 10 taona izay, ary nahavariana hatrany ireo mpijery ny seho nasehon’izy ireo toa ny tany Espagne, Suisse, Frantsa… « Ny fifantenana ireo handray anjara amin’ny fitetezam-paritra dia tsy ny resaka feo ihany fa eo ihany koa ny fomba fiarahana ao amin’ny tarika sy ny fahaizana ny fianarana », araka ny fanazavan’ny mpitarika azy ireo. Tsiahivina fa saika avy amin’ireo fianakaviana sahirana ny ankamaroan’ny mpikambana ao amin’ny Malagasy Gospel Choir.